Nahazo tehaka ny talen-tsekoly. Misy koa anefa ireo mampandoa ny an-tsasany fa tsy misy handoavana ny karaman'ny mpampianatra hono. Izay tsy mahaloa dia rahonana roahina. Marihina anefa fa ireo mpianatra hanala ny fanadinam panjakana BEPC T9 sy ny Bakalorea T12 ihany no mianatra nanomboka ny alarobia 22 aprily teo. Ny hanala CEPE T5 moa dia ny alatsinainy 27 aprily ho avy izao vao hianatra. 3 andro izany dia handoavana ny antsasany. Voarara koa ny fakan-drivotra, nefa mivarotra ny ody ambavafo ilay tompon'ny sekoly dia avoakany ny mpianany mandritra ny fahefakadiny. Mila harahi-maso ihany ve izany izy ireny sekoly tsy miankina ireny. Ady amin'ny aretina tsy hita maso mantsy no atrehan'izao tontolo izao ka mila mitandrina.